Yintoni esinokuyithatha siye kwiindawo ezicocekileyo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Nuria | | Ikhaya eliGreen, Ukusetyenziswa kwakhona
Indawo yenkunkuma ecocekileyo e-US
Sonke sinikwe ingxaki ye indlela yokulahla izinto ezindala ukuba sinayo kwigumbi lokugcina iminyaka ngaphandle kokwazi ngokuqinisekileyo ukuba masenze ntoni na, ngenye imini entle senza isigqibo saza sayiphosa esityeni lo gama sisava "ilizwi lesazela" esixelela ukuba siyayenza ayilunganga, ukuba singcolisa indalo.
Ukuba ungomnye wabo babeka izandla zabo entloko, yazi ukuba zikhona izisombululo. Kuqala izikhongozeli ezityheli, eziluhlaza neziluhlaza iphepha kunye nekhadibhodi, iglasi kunye nokupakisha. Ukuba akukho namnye kwindawo ohlala kuyo okanye edolophini, ungaya kwiBhunga leSixeko uyokuxela, kungoku nje amaBhunga esiXeko angaphindi asetyenziswe kwakhona bohlwaywa izohlwayo.
Ukuba "iimbiza" zakho azikho kwiqela lenkunkuma edolophini endikhankanye ngaphambili, usenayo enye indlela "amanqaku acocekileyo»Elungisiweyo okanye iselfowuni apho ungashiya khona uhlobo oluthile lwenkunkuma olusebenzayo kwaye luyayithanda yethu ulwazi ngolondolozo Isixelela ukuba akufuneki siyishiye kwisitya esiqhelekileyo okanye kwezi zisetyenziswayo.
Inkunkuma kukuba ngohlobo lwamacandelo ayo kakhulu Inetyhefu kwaye kufuneka zisuswe kwizityalo ezizodwa okanye zinokulandela ikhonkco le kwakhona Kwaye ube isetyenziswe kwakhona ngabanye abantu okanye amaziko, anjengeekhompyuter kunye nee-mobiles.
Inkunkuma esinokuthi siyise kwindawo ecocekileyo zezi:
- Iibhetri kunye neebhetriIzinto zayo, ingakumbi imekyuri, zingcolise kakhulu.
- Izixhobo amayeza, Ziye zaphinda zaphinda zaphinda zenziwe kwakhona, ngokukhethekileyo kwi-SIGRE kwindawo ecocekileyo ezikhemesti.
- Inkunkuma yesinyithi encinci ezifana neepani okanye iimbiza.
- ZeThelevishini y iimonitha, Iiplastiki, iglasi kunye nentsimbi zahlulwe.
- Izixhobo zasekhaya, Izinto zokwahlulahlula kwaye zombini iiplastiki kunye nesinyithi ziphinda zisetyenziswe kwakhona.
- Ukupheka iioyile, ziphinda zisetyenziswe ukwenza i-biodiesel.
- Iioyile zeemoto, zisetyenziswa njengesiseko sesithambisi.
- IiCD neeDVD, Iplastiki iphinda irisayikilishwe.
- Impahla, amashiti, iitawuli nazo zonke iinguboUkuba zikwimeko entle, zinikezelwa kwiziseko zoncedo, njengezihlangu.
- X-reyi, iityiwa zesilivere kunye nezinye izinto ziyafunyanwa.
- Ifenitshalainkunkuma, junk, iinkuni, kufuneka usebenzise inkonzo yokuqokelela iHolo yeSixeko.
- IAerosolesAmacandelo ayo ahlukene, ukupakishwa kuphinda kusetyenziswe kwakhona.
- Ipeyinti nezinyibilikisiIzinto zahluliwe kwaye izikhongozeli ziphinde zenziwa kwakhona.
- Inkunkuma ye-elektroniki njengaye iikhomputha y iinqwelo zahlukile kwaye iipesenti ezingama-90 zisetyenzisiwe. Abo basebenza kakuhle (80%) banikelwe kwaye isetyenziswe kwakhona kunye nezo zingaphinde zenziwe ntsha ziifowuni eziphathwayo. Zahlule kwiiplastikhi nakwizinyithi (iqulethe ilothe kunye nezinye izinto ze-carcinogenic), ikwaqulathe izinyithi ezixabisekileyo.
- Iikhatriji ze-inki, iplastikhi iyazitshajwa okanye ziphinde zenziwe ntsha.
- Iibhalbhu ezibengezelayo, Isinyithi kunye neglasi ziphinde zenziwa kwakhona, uthuli lwe-mercury lufunyenwe kwakhona.
- Iintambo, Iplastiki kunye nesinyithi zahlulwe zaphinda zaphinda zaphinda zenziwa.
Kuzo zonke izixeko zaseSpain kukho iindawo eziluhlaza. Kwiwebhusayithi ye-OCU kukho ifayile ye Isifumani ichaphaza eliluhlaza apho unokufumana eyona ikufutshane nekhaya lakho. Kububulumko ukuthi indawo nganye ecocekileyo inezayo imigaqo, ke kungcono ukubiza ngaphambili ukuze ubone into abayifumanayo nabangenayo.
Sibuyisela ezi zinto zilandelayo apho sizithengileyo: amavili kunye neeboggies. Isirinji ye-insulin iziswa kwiziko lezempilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Yintoni esinokuyithatha siye kwiindawo ezicocekileyo
Buza, ngaba ufumana oomatrasi?
Iintsomi malunga ne-lithium